बढ्यो आज अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ? – Khabar Silo
बढ्यो आज अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ।
आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ।
त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४६ पैसा तोकेको छ भने कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १२५ रुपैयाँ ३६ पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १२६ रुपैयाँ २ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्ड १ को खरिदर मूल्य १४२ रुपैयाँ ७० पैसा छ भने बिक्रीदर मूल्य १४३ रुपैयाँ ४५ पैसा छ।
आज अमेरिका, साउदी, यूएई, कुवेत र मलेसियासहित धेरै देशका मुद्राको भाउ बढ्यो
आज अमेरिका, साउदी, यूएई, कुवेत र मलेसियासहित धेरै देशका मुद्राको भाउ बढ्यो काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोकेको छ। राष्ट्र बैँकका अनुसार आज अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशका मुद्राको भाउ बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३६ पैसा […]
Posted on September 10, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । साताको छैटौँ दिन अर्थात आज (शुक्रबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ केही बढेको छ। हिजो प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको सुनको आज भने प्रतितोला १ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। छापावाल सुन हिजो प्रतितोला ९० हजार […]
काठमाडौँ – बिहीबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको मुल्यमा प्रति तोला ५ सयले बढेको छ । योसँगै नेपालमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै बढी प्रति तोला ९४ हजार ५ सय रूपैयाँ पुगेको छ । यसअघि बुधबार सुन प्रति तोला ९४ हजारमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै बुधबार तेजावी सुनको […]